Yiba PCBA + Ibhokisi yePlasitic-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Senza iindibano zeemveliso ezipheleleyo.Ukudibanisa i-PCBA kwizibiyeli zeplastiki yeyona nkqubo iqhelekileyo.
Kanye njengendibano yePCB, Sivelisa iimbumba zeplastiki / iinaliti zendlu.Oku kunika umthengi wethu inzuzo enkulu malunga nolawulo lomgangatho, ukuhanjiswa kunye neendleko.
Ukuba nolwazi olunzulu kubumba lweplastiki / izitofu zahlula i-Fumax kwenye imveliso yendibano ye-PCB ecocekileyo.Abathengi bayonwabile ukufumana isisombululo esipheleleyo sokujika isitshixo seemveliso ezigqityiweyo ezivela kwiFumax.Ukusebenza neFumax kuba lula kakhulu ukusuka ekuqaleni ukuya kwimveliso egqityiweyo.
Eyona imathiriyeli yePlastiki eqhelekileyo esisebenza nayo yi-ABS, iPC, iPC/ABS, iPP, inayiloni, iPVDF, iPVC, iPPS, iPS, iHDPE, njl..
Okulandelayo kuphononongo lwemveliso equlathe iibhodi zePCB, iiplastiki, iingcingo, iziqhagamshelo, inkqubo, uvavanyo, ipakethe… njalo njalo ukuya kwimveliso yokugqibela- elungele ukuthengiswa.
Ukuhamba kwemveliso ngokubanzi
AR9331 inkumbulo inkqubo
Ukuhlolwa kwendibano ye-SMD
Inkqubo yememori ye-AR7420
Uvavanyo lwe-PLC yokusebenza
Ibhentshi yovavanyo ye-FAL
Inkcazo yokuVeliswa kweMveliso ye-Smart Master G3
1. UKWENZIWA KWESESIKWENI
AD Uxwebhu olusebenzayo
AC Enye indlela yangoku
I-AOI Ukuhlolwa okuzenzekelayo okuSebenzayo
I-AQL Umgangatho owamkelekileyo umda
KULUNGILE IBhili yezinto eziphathekayo
I-COTS Urhwebo ngaphandle kweShelufu
CT Isiguquli sangoku
ICPU IYunithi yeProsesa esembindini
DC Ngqo ngoku
DVT Uvavanyo loQinisekiso loYilo
EMS Inkonzo yokwenziwa kwe-Electronic
VUMA Igolide yokuntywiliselwa kweNickel engenaMbane
ESD Ukukhutshwa kwe-ElectroStatic
FAL Umgca wokuGqibela weNdibano
IPC I-Association Connecting Electronics Industries, eyayifudula iyiZiko leeSekethe eziprintiweyo
I-LAN Uthungelwano lweNdawo yeNgingqi
I-LED I-Electroluminescent Diode yokukhanya
MSL INqanaba eliBuntu okuBuntuma
NA Akukho NONE
PCB Ibhodi yeSekethe eprintiweyo
PLC Unxibelelwano lwePowerline
RDOC UXWEBHU loSingqinisiso
SMD IsiXhobo esiNnyuswe ngomphezulu
SOC Inkqubo kwiChip
SUC Itsheyini yonikezo
WAN Uthungelwano lweNdawo eBanzi
→Amaxwebhu Adweliswe njenge RDOC-XXX-NN
Apho “XXXX” inokuba: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC okanye TST Apho “NN” linani loxwebhu
Idweliswe njenge REQ-XXX-NNNN
Apho "XXXX" ingaba: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC okanye TST
Apho “NNNN” linani lemfuno
→Iindibano ezingaphantsi ezidweliswe njenge-MLSH-MG3-NN
Apho “NN” linani lendibano encinane
1.3 Ulawulo loguqulelo lwamaxwebhu
Iindibano ezincinci kunye namaxwebhu aneenguqulelo zawo ezibhaliswe kuxwebhu: FCM-0001-VVV
IiFirmwares zineenguqulelo zazo ezibhaliswe kuxwebhu: FCL-0001-VVV
Apho "VVV" yinguqulelo yoxwebhu.
2 Umxholo kunye nenjongosenzi
Olu xwebhu lunika iimfuno zokwenziwa kweSmart Master G3.
I-Smart Master G3 emva koko echongwe “njengemveliso”, kukudityaniswa kwezinto ezininzi njengezixhobo zombane kunye nezoomatshini kodwa zihlala ziyinkqubo yombane.Yiyo loo nto iMylight Systems (MLS) ijonge i-Electronic Manufacturer Service (EMS) ukuze ilawule ukwenziwa kwayo yonke imveliso.
Olu xwebhu kufuneka luvumele ikontraki engaphantsi ukuba inike iMylight Systems unikezelo lwehlabathi malunga nokuveliswa kwemveliso.
Iinjongo zolu xwebhu zezi:
-Nika idatha yobugcisa malunga nokwenziwa kwemveliso,
-Nika iimfuno zomgangatho wokuqinisekisa ukuthotyelwa kwemveliso,
- Nika iimfuno zekhonkco lonikezelo ukuqinisekisa ixabiso kunye nomgangatho wemveliso.
Ikontraki engaphantsi kwe-EMS kufuneka iphendule kwi-100% yeemfuno zolu xwebhu.
Akukho mfuneko inokutshintshwa ngaphandle kwesivumelwano seMLS.
Ezinye iimfuno (ukumakishwa "njengoyilo lwe-EMS oluceliwe") cela i-subcontractor ukuba inike impendulo kwindawo yobugcisa, njengokulawula umgangatho okanye ukupakishwa.Ezi mfuno zishiywe zivulekile ukuba ikontraki ephantsi ye-EMS icebise impendulo enye okanye ezininzi.I-MLS iya kuthi ke iqinisekise impendulo.
I-MLS kufuneka ibe nobudlelwane obuthe ngqo kunye ne-EMS subcontractor ekhethiweyo, kodwa i-EMS i-subcontractor inokukhetha kwaye ilawule ngokwayo abanye abancinci kunye nemvume ye-MLS.
3 Ubume bocazululo lweNdibano
4 Ukuhamba kwemveliso ngokubanzi
5 Iimfuno zekhonkco lonikezelo
Amaxwebhu ekhonkco lonikezelo
RDOC-SUC-2. I-MLSH-MG3-25-MG3 Umkhono wokupakisha
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Isaziso sofakelo MG3
RDOC-SUC-4. Ifayile ye-GEF-0003-Gerber ye-AR9331 ibhodi yeMG3
I-subcontractor ekhethiweyo kufuneka ikwazi ukwenza iimveliso ze-10K ngenyanga.
(Uyilo lwe-EMS luceliwe)
Ukupakishwa kokuthunyelwa phantsi koxanduva lwekontrakta engaphantsi.
Ukupakishwa kwempahla kufuneka kuvumele ukuba iimveliso zihanjiswe ngolwandle, ngomoya nangeendlela.
Inkcazo yokupakisha yokuthunyelwa kufuneka inikwe i-MLS.
Ukupakishwa kokuthunyelwa kufuneka kubandakanye (jonga iSazobe 2):
- Imveliso MG3
- 1 ikhathoni eqhelekileyo (umzekelo: 163x135x105cm)
- Ukhuseleko lweebhokisi zangaphakathi
- 1 umkhono wangaphandle onomtsalane (ubuso obu-4) kunye nelogo yeMylight kunye nolwazi olwahlukileyo.Jonga i-RDOC-SUC-2.
- 3 CT probes.Jonga i-RDOC-SUC-1
-Ikhebula le-Ethernet eli-1: intambo ecaba, 3m, ROHS, 300V isolation, Cat 5E okanye 6, CE, 60 ° c ubuncinci
- 1 iphecana lobuchwepheshaRDOC-SUC-3
- I-1 ileyibhile yangaphandle enolwazi lokuzazisa (umbhalo kunye nekhowudi yebha): Ireferensi, inombolo yothotho, idilesi ye-PLC ye-MAC
- Ukukhuselwa kwengxowa yeplastiki ukuba kunokwenzeka (ukuxoxa)
Umzobo 2. Umzekelo wokupakishwa
REQ-SUC-0022: Uhlobo olukhulu lokupakisha
I-subcontractor kufuneka ichaze ukuba iipakethe zeyunithi yokuhanjiswa ngaphakathi kweepakethe ezinkulu.
Ubuninzi benani le-unit package 2 yi-25 ngaphakathi kwebhokisi enkulu.
Ulwazi lokuchongwa kweyunithi nganye (ngekhowudi ye-QR) kufuneka ibonakale ngeleyibhile yangaphandle kwiphakheji nganye enkulu.
REQ-SUC-0030: Ukunikezelwa kwePCB
Ikontraki engaphantsi kufuneka ikwazi ukubonelela okanye ukwenza iPCB.
REQ-SUC-0040: Ukunikezelwa koomatshini
I-subcontractor kufuneka ikwazi ukubonelela okanye ukwenza indawo ebiyelweyo yeplastiki kunye nawo onke amalungu omatshini.
REQ-SUC-0050: Ubonelelo lwamacandelo e-elektroniki
I-subcontractor kufuneka ikwazi ukubonelela ngawo onke amacandelo e-electronics.
I-REQ-SUC-0060: Ukukhetha icandelo le-Passive
Ukuze kwandiswe iindleko kunye nendlela yokulungiselela, i-subcontractor ingacebisa izibhengezo eziza kusetyenziswa kuzo zonke iinqununu ze-passive ezichazwe njenge "generic" kwi-RDOC-ELEC-3.Amacandelo e-Passive kufuneka ahambelane nekholam yenkcazo RDOC-ELEC-3.
Onke amacandelo akhethiweyo kufuneka aqinisekiswe yi-MLS.
REQ-SUC-0070: Iindleko zehlabathi
Injongo yeendleko ze-EXW zemveliso kufuneka inikezelwe kuxwebhu olunikezelweyo kwaye inokuhlaziywa rhoqo ngonyaka.
REQ-SUC-0071: iindleko ezineenkcukacha
Iindleko kufuneka zichazwe ngobuncinci:
- I-BOM yendibano nganye ye-elektroniki, amacandelo oomatshini
- Iindleko zesakhiwo
-Iindleko zemizi-mveliso: iibhentshi, izixhobo, inkqubo, uthotho lwangaphambili…
REQ-SUC-0080: Ukwamkelwa kwefayile yokuvelisa
Ifayile yokuvelisa kufuneka igqitywe ngokupheleleyo kwaye yamkelwe yi-MLS phambi kochungechunge lwangaphambili kunye nokuveliswa kobuninzi.
REQ-SUC-0090: Ukwenziwa kweefayile zokutshintsha
Naluphi na utshintsho ngaphakathi kwifayile yokuvelisa kufuneka ixelwe kwaye yamkelwe yi-MLS.
I-REQ-SUC-0100: Isiqinisekiso sokuqhuba i-pilot
Isiqinisekiso sangaphambili seemveliso ezingama-200 siyacelwa phambi kokuba kuqaliswe imveliso yobuninzi.
Ukusilela kunye nemiba efunyenwe ngexesha lovavanyo lovavanyo kufuneka kuxelwe kwi-MLS.
I-REQ-SUC-0101: Uvavanyo lokuthembeka kwangaphambili
Emva kokwenziwa kwePilot, uvavanyo lokuthembeka, okanye uvavanyo loQinisekiso loYilo (DVT) kufuneka lwenziwe ngobuncinci:
- Imijikelo yobushushu ekhawulezayo -20°C / +60°C
- Iimvavanyo zentsebenzo ye-PLC
- Ukuhlolwa kobushushu bangaphakathi
- Uvavanyo lokuwisa
- Iimvavanyo zokusebenza ngokupheleleyo
- Iimvavanyo zoxinzelelo lwamaqhosha
- Ukutshisa ixesha elide ngaphakathi
- Ukufuma ukuqala
- Imijikelo yamandla
-Iziqhagamshelo zokujonga i-impedance
Inkqubo yovavanyo eneenkcukacha iya kunikwa ngunokontraka ongaphantsi kwaye kufuneka yamkelwe yi-MLS.
Zonke iimvavanyo ezingaphumelelanga kufuneka zixelwe kwi-MLS.
REQ-SUC-0110: Umyalelo wokuvelisa
Yonke iodolo yokwenziwa iya kwenziwa ngolwazi olungezantsi:
- Ireferensi yemveliso eceliweyo
- Ubungakanani beemveliso
- Ukupakishwa kwenkcazo
- Ifayile yenguqulo ye-Hardware
-Ifayile yeenguqulelo zeFirmware
-Ifayile yobuntu (enedilesi ye-MAC kunye neenombolo zeserial)
Ukuba kukho nayiphi na le ngcaciso elahlekileyo okanye ayicacanga, i-EMS akufuneki iqalise imveliso.
6 Iimfuno zomgangatho
I-PCB, izinto ze-elektroniki kunye neendibano zombane kufuneka zigcinwe kwindawo efumileyo kunye negumbi elilawulwa ngamaqondo obushushu:
- Ukufuma okuhambelanayo ngaphantsi kwe-10%
- Ubushushu buphakathi kwe 20°C kunye ne 25°C.
I-subcontractor kufuneka ibe nenkqubo yokulawula i-MSL kwaye inike i-MLS.
I-PCB kunye neenxalenye ezininzi ezichongiweyo kwi-BOM zixhomekeke kwiinkqubo ze-MSL.
Imveliso kufuneka ithotyelwe RoHS.
I-subcontractor kufuneka ixelele i-MLS ngayo nayiphi na into esetyenziswe kwimveliso.
Ngokomzekelo, i-subcontractor kufuneka ikwazise i-MLS yeyiphi iglue / i-solder / i-cleaner esetyenziswayo.
I-REQ-QUAL-0050: Umgangatho wekontraki engaphantsi
I-subcontractor kufuneka iqinisekiswe i-ISO9001.
Ikontraki engaphantsi kufuneka inike isatifikethi sayo se-ISO9001.
I-REQ-QUAL-0051: Umgangatho we-2 wekontraki engaphantsi
Ukuba ikontraki engaphantsi isebenza nabanye ookontraka abancinci, kufuneka nabo baqinisekiswe ISO9001.
Onke amacandelo e-elektroniki kunye neebhodi ze-elektroniki kufuneka ziphathwe ngokhuseleko lwe-ESD.
Iibhodi ze-electronics kufuneka zicocwe ukuba ziyimfuneko.
Ukucoca makungonakalisi iindawo ezinovakalelo njengeziguquli, iziqhagamshelo, iimpawu, amaqhosha, i-indcutors...
Ikontraki engaphantsi kufuneka inike i-MLS inkqubo yayo yokucoca.
I-REQ-QUAL-0080: Uhlolo olungenayo
Onke amacandelo e-elektroniki kunye neebhetshi ze-PCB kufuneka zibe nohlolo olungenayo kunye nemida ye-AQL.
Amalungu oomatshini kufuneka abe nomlinganiselo wokuhlola ongenayo kunye nemida ye-AQL ukuba akhutshelwe ngaphandle.
I-subcontractor kufuneka inike i-MLS iinkqubo zayo zokulawula ezingenayo ezibandakanya imida ye-AQL.
I-REQ-QUAL-0090: Ulawulo lwemveliso
Imveliso kufuneka ibe nolawulo lwemveliso kunye nokuhlolwa kwesampulu encinci kunye nemida ye-AQL.
I-subcontractor kufuneka inike i-MLS iinkqubo zayo zokulawula igalelo kuquka imida ye-AQL.
REQ-QAL-0100: Ukugcinwa kweemveliso ezikhatywayo
Imveliso nganye engaphumeleli uvavanyo okanye ulawulo, kungakhathaliseki ukuba luluphi uvavanyo, kufuneka igcinwe yi-MLS subcontractor yoPhando loMgangatho.
I-REQ-QAL-0101: Ulwazi lweemveliso ezikhatywayo
I-MLS kufuneka yaziswe ngayo nayiphi na isiganeko esinokwenza iimveliso ezikhatywayo.
I-MLS kufuneka ixelelwe malunga nenani leemveliso ezikhatywayo okanye naziphi na iibhetshi.
REQ-QAL-0110: Ingxelo ngoMgangatho woMveliso
I-EMS i-subcontractor kufuneka inike ingxelo kwi-MLS kwibhetshi nganye yemveliso ubuninzi beemveliso ezikhatywayo ngovavanyo okanye isigaba solawulo.
Zonke izinto zolawulo, iimvavanyo kunye nokuhlolwa kufuneka zigcinwe kwaye zibhalwe umhla.
Iibhetshi mazichongwe ngokucacileyo kwaye zahlulwe.
Iireferensi ezisetyenziswe kwiimveliso kufuneka zilandeleke (ireferensi echanekileyo kunye nebhetshi).
Naluphi na utshintsho kuyo nayiphi na ireferensi kufuneka yaziswe kwi-MLS ngaphambi kokuphunyezwa.
I-REQ-QUAL-0130: Ukugatywa kwehlabathi
I-MLS inokubuyisela ibhetshi epheleleyo ukuba ukugatywa ngenxa ye-subcontractor ingaphezulu kwe-3% ngaphantsi kweminyaka emi-2.
I-REQ-QUAL-0140: Uphicotho-zincwadi / uhlolo lwangaphandle
I-MLS ivunyelwe ukutyelela i-subcontractor (kubandakanywa nabancinci bayo) ukubuza iingxelo zomgangatho kunye nokwenza iimvavanyo zokuhlola, ubuncinane amaxesha ama-2 ngonyaka okanye nayiphi na ibhetshi yokuvelisa.I-MLS inokumelwa yinkampani yomntu wesithathu.
I-REQ-QUAL-0150: Ukuhlolwa okubonakalayo
Imveliso inokuhlolwa okubonakalayo okukhankanyiweyo ngaphakathi kokuhamba kokwenziwa ngokubanzi.
Olu hlolo luthetha:
- Khangela imizobo
- Ukutshekishwa kweendibano ezichanekileyo
- Khangela iilebhile/izitikha
- Ukutshekishwa kwemikrwelo okanye nakuphi na ukusilela okubonakalayo
- Ukuqiniswa kwe-Soldering
- Qwalasela amaqondo obushushu ajikeleze iifusi
- Qwalasela izalathiso zeentambo
- Iitshekhi zeglu
- Khangela iindawo zokunyibilika
I-subcontractor kufuneka inike i-MLS iinkqubo zayo zokuhlolwa kwe-Visual kubandakanywa nemida ye-AQL.
I-REQ-QUAL-0160: Ukuhamba kwemveliso ngokubanzi
Umyalelo wenyathelo ngalinye lokuhamba ngokuBanzi kwemveliso kufuneka uhlonitshwe.
Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu, njengomzekelo reparability, inyathelo kufuneka lenziwe kwakhona, onke amanyathelo emva kufuneka kwenziwe kwakhona ingakumbi uvavanyo Hipot kunye novavanyo FAL.
Iimfuno zePCB ezisi-7
Imveliso yenziwe ngePCB ezintathu ezahlukeneyo
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Ukwamkeleka kweebhodi eziprintiweyo
RDOC-PCB-2. Ifayile ye-GEF-0001-Gerber yebhodi ephambili yeMG3
RDOC-PCB-3. Ifayile ye-GEF-0002-Gerber ye-AR7420 ibhodi yeMG3
RDOC-PCB-4. Ifayile ye-GEF-0003-Gerber ye-AR9331 ibhodi yeMG3
RDOC-PCB-5. I-IEC 60695-11-10: 2013 Uvavanyo lwengozi yomlilo-Icandelo le-11-10: Uvavanyo lwamadangatye-50W iindlela zovavanyo oluthe tye kunye nothe nkqo
REQ-PCB-0010: Iimpawu zePCB
Iimpawu eziphambili ezingezantsi kufuneka zihlonitshwe
Amanani amaleko 4
Ubunzima bobhedu lwangaphandle 35µm / 1oz min
Ubungakanani bePCBs 840x840x1.6mm (ibhodi ephambili), 348x326x1.2mm (ibhodi ye-AR7420),
780x536x1mm (AR9331 ibhodi)
Ubunzima bobhedu lwangaphakathi 17µm / 0.5oz min
Ubuncinane bokwahluka/ububanzi bendlela 100µm
Ubuncinci imaski yesolder 100µm
Ubuncinci ngedayamitha 250µm (omatshini)
Izinto zePCB FR4
Ubuncinci bobunzima phakathi 200µm
iileya zobhedu zangaphandle
Silkscreen Ewe phezulu nasezantsi, umbala omhlophe
I-Soldermask Ewe, eluhlaza phezulu nasezantsi, kwaye ngaphezu kwayo yonke i-vias
Ukugqitywa komphezulu VUMA
PCB kwiPaneli Ewe, inokulungiswa ngokwemfuno
Imaski yeSolder ivuliwe nge Ewe
Izinto eziphathekayo ROHS/FINYELELA/
REQ-PCB-0020: uvavanyo lwe-PCB
Ukwahlukaniswa kweenethi kunye nokuziphatha makuvavanywe 100%.
REQ-PCB-0030: Ukumakishwa kwePCB
Ukumakishwa kwee-PCB kuvunyelwe kuphela kwindawo enikezelweyo.
Ii-PCBs maziphawulwe ngereferensi yePCB, inguqulelo yayo kunye nomhla wokwenziwa kwazo.
Makusetyenziswe isalathiso se-MLS.
REQ-PCB-0040: Iifayile zePCB zokuvelisa
Qaphela, iimpawu kwi-REQ-PCB-0010 zezona nkcukacha ziphambili kwaye kufuneka zihlonitshwe.
REQ-PCB-0050: Umgangatho wePCB
Ukulandela i-IPC-A-600 iklasi 1. BonaRDOC-PCB-1.
Izinto ezisetyenziswa kwi-PCB mazihambelane ne-CEI 60695-11-10 de V-1.Jonga i-RDOC-PCB-5.
8 Iimfuno ezidityanisiweyo zombane
Ibhodi ye-elektroniki e-3 kufuneka idityaniswe.
RDOC-ELEC-1. IPC-A-610 Ukwamkeleka kweeNdibano zombane
RDOC-ELEC-2. Ifayile ye-GEF-0001-Gerber yebhodi ephambili yeMG3 RDOC
I-ELEC-3. Ifayile ye-GEF-0002-Gerber ye-AR7420 ibhodi yeMG3 RDOC
I-ELEC-4. Ifayile ye-GEF-0003-Gerber ye-AR9331 ibhodi yeMG3 RDOC
I-ELEC-5. I-BOM-0001-BOM yebhodi ephambili ye-MG3 RDOC-ELEC-6.
BOM-0002 Ifayile ye-BOM yebhodi ye-AR7420 ye-MG3 RDOC-ELEC-7.
BOM-0003 Ifayile ye-BOM ye-AR9331 ibhodi yeMG3
Umzobo 3. Umzekelo weebhodi ze-elektroniki ezidityanisiweyo
I-BOM RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6, kunye ne-RDOC-ELEC-7 kufuneka ihlonitshwe.
REQ-ELEC-0020: INdibano yamacandelo e-SMD:
Amacandelo e-SMD kufuneka adityaniswe ngomgca wokuhlanganisa ozenzekelayo.
Jonga i-RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.
I-REQ-ELEC-0030: INdibano yamacandelo omngxuma:
Ngokusebenzisa amacandelo umngxuma kufuneka inyuswe ngamaza ekhethiweyo okanye ngesandla.
Izikhonkwane ezishiyekileyo kufuneka zisikwe ngaphantsi kwe-3mm ubude.
I-REQ-ELEC-0040: Ukuqiniswa kwe-Soldering
Ukuqiniswa kwe-soldering kufuneka kwenziwe ngaphantsi kwe-relay.
Umzobo 4. Ukuqiniswa kwe-soldering kwibhodi enkulu ephantsi
I-REQ-ELEC-0050: Ukunciphisa Ubushushu
I-Fuses (i-F2, i-F5, i-F6 kwibhodi ephambili) kufuneka ibe ne-heat shrink ukuze igweme iindawo zangaphakathi ukuba zifakwe ngaphakathi kwendawo evaliweyo kwimeko yokugqithisa.
Umzobo 5. Ubushushu buyancipha malunga neefusi
REQ-ELEC-0060: Ukukhuselwa kweRubber
Akukho khuseleko lwerabha olufunekayo.
I-REQ-ELEC-0070: I-CT probes connectors
Izihlanganisi ze-CT probes zabasetyhini kufuneka zithengiswe ngesandla kwibhodi ephambili njengoko kumfanekiso ongezantsi.
Sebenzisa ireferensi ye-MLSH-MG3-21 isinxibelelanisi.
Qaphela umbala kunye necala lentambo.
Umzobo 6. INdibano ye-CT probes connectors
I-REQ-ELEC-0071: I-CT probes connectors glue
Iglu kufuneka yongezwe kwi-CT probes connector ukuze zikhuseleke ngokungcangcazela/kukusetyenziswa kakubi kokwenziwa.
Jonga uMfanekiso ngezantsi.
Isalathiso seglue singaphakathi kwe-RDOC-ELEC-5.
Umzobo 7. Iglu kwi-CT probes connectors
Akukho tropicalization ibuzwayo.
REQ-ELEC-0090: Ukuhlolwa kweNdibano ye-AOI:
I-100% yebhodi kufuneka ibe nokuhlolwa kwe-AOI (i-soldering, i-orientation kunye nokumakishwa).
Zonke iibhodi kufuneka zihlolwe.
Inkqubo ye-AOI eneenkcukacha kufuneka inikwe i-MLS.
I-REQ-ELEC-0100: Ulawulo lwamacandelo:
Onke amacandelo okwenziwa kufuneka atshekishwe phambi kokuba kunikwe ingxelo kwi-PCB, ubuncinane ngohlolo olubonakalayo lomntu.
Inkqubo eneenkcukacha zokwenziwa kolawulo lwamacandelo kufuneka inikwe i-MLS.
REQ-ELEC-0110: Ukuhlolwa kwe-X ray:
Akukho ukuhlolwa kwe-X ray kuceliwe kodwa umjikelo wobushushu kunye novavanyo olusebenzayo kufuneka lwenziwe kulo naluphi na utshintsho kwinkqubo yendibano ye-SMD.
Iimvavanyo zomjikelo wobushushu kufuneka zenziwe kwiimvavanyo zemveliso nganye ezinemida ye-AQL.
REQ-ELEC-0120: Ukusetyenzwa kwakhona:
Ukuphinda kusetyenzwe ngesandla kweebhodi ze-electronics kuvumelekile kuwo onke amacandelo ngaphandle kweesekethe ezipheleleyo: U21/U22 (AR7420 board), U3/U1/U11(AR9331 board).
Ukuphinda kusetyenzwe ngokuzenzekelayo kuvumelekile kuwo onke amacandelo.
Ukuba imveliso disassembly ukwenza rework kuba uyasilela kwi ibhentshi yovavanyo lokugqibela, kufuneka enze kwakhona uvavanyo Hipot kunye novavanyo lokugqibela.
REQ-ELEC-0130: 8pins isinxibelelanisi phakathi kwebhodi AR9331 kunye AR7420 ibhodi
Izihlanganisi ze-J10 zisetyenziselwa ukudibanisa ibhodi AR9331 kunye nebhodi AR7420.Le ndibano kufuneka yenziwe ngesandla.
Isalathiso somdibaniso oza kusetyenziswa yi-MLSH-MG3-23.
Isidibanisi sine-2mm pitch kwaye ukuphakama kwayo yi-11mm.
Umzobo 8. Iintambo kunye nezihlanganisi phakathi kweebhodi ze-electronics
REQ-ELEC-0140: 8pins isinxibelelanisi phakathi kwebhodi engundoqo kunye nebhodi ye-AR9331
Izixhumi ze-J12 zisetyenziselwa ukudibanisa ibhodi ephambili kunye neebhodi ze-AR9331.Le ndibano kufuneka yenziwe ngesandla.
Isalathiso sekhebula kunye nezihlanganisi ezi-2 yi
Izihlanganisi ezisetyenzisiweyo zine-2mm pitch kwaye ubude bentambo yi-50mm.
REQ-ELEC-0150: 2pins isinxibelelanisi phakathi kwebhodi engundoqo kunye nebhodi ye-AR7420
Isidibanisi seJP1 sisetyenziselwa ukudibanisa ibhodi ephambili kwibhodi ye-AR7420.Le ndibano kufuneka yenziwe ngesandla.
Ubude bentambo yi-50mm.Iingcingo kufuneka zijijelwe kwaye zikhuselwe / zilungiswe ngokucutha ubushushu.
I-REQ-ELEC-0160: Indibano ye-Disipator yokufudumeza
Akukho sixhobo sokufudumeza kufuneka sisetyenziswe kwitshiphu ye-AR7420.
9 Iimfuno zamalungu oomatshini
RDOC-MEC-1. I-PLD-0001-PLD ye-Enclosure Top ye-MG3
RDOC-MEC-2. I-PLD-0002-PLD ye-Enclosure Bottom ye-MG3
RDOC-MEC-3. I-PLD-0003-PLD yokukhanya okuphezulu kweMG3
RDOC-MEC-4. PLD-0004-PLD yeqhosha le-1 leMG3
RDOC-MEC-5. PLD-0005-PLD yeqhosha le-2 leMG3
RDOC-MEC-6. I-PLD-0006-PLD ye-Slider ye-MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013 Uvavanyo lwengozi yomlilo-Icandelo 11-10: Uvavanyo lwamadangatye - 50 W oxwesileyo kunye
iindlela zokuvavanya idangatye nkqo
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 IIMFUNO ZOKHUSELEKO KWISIXHOBO SOMbane soMLINGANIso,
ULAWULO, KUNYE NOKUSETYENZISWA ELAbhoratri - ICANDELO 1: IIMFUNO NGOKUBANZI
RDOC-MEC-9. I-IEC 61010-1 2010 Iimfuno zokhuseleko kwizixhobo zombane zokulinganisa, ukulawula,
kunye nokusetyenziswa kwelabhoratri - iCandelo 1: Iimfuno ngokubanzi
RDOC-MEC-10. Ifayile ye-BOM-0016-BOM ye-MG3-V3
RDOC-MEC-11. PLA-0004-Assembly umzobo MG3-V3
Umzobo 9. Umbono ogqabhukileyo we-MGE.Jonga i-RDOC-MEC-11 kunye ne-RDOC-MEC-10
Indawo ebiyelweyo yomatshini yenziwe ngamacandelo ama-6 eplastiki.
I-REQ-MEC-0010: Ukhuseleko ngokubanzi kumlilo
Iinxalenye zeplastiki kufuneka zihambelane ne-RDOC-MEC-8.
I-REQ-MEC-0020: Izinto eziphathekayo zamalungu eplastiki kufuneka zithintele ilangatye(Uyilo lwe-EMS luceliwe)
Izinto ezisetyenziselwa iinxalenye zeplastiki kufuneka zibe nebakala V-2 okanye ngcono ngokwe RDOC-MEC-7.
I-REQ- MEC-0030: Izinto ezisetyenziswayo zeziqhagamshelo mazingabinadanga omlilo(Uyilo lwe-EMS luceliwe)
Izinto ezisetyenziselwa izihlanganisi izihlanganisi kufuneka zibe nebakala V-2 okanye ngcono ngokwe RDOC-MEC-7.
REQ-MEC-0040: Ukuvula ngaphakathi koomatshini
Akufunekanga ibenemingxuma ngaphandle kwe:
- Iziqhagamshelo (kufuneka zibe ngaphantsi kwe-0.5mm yokucoca ngoomatshini)
-Umngxuma wokusetwa ngokutsha kweFactory (1.5mm)
- Imingxuma yokulahla ubushushu (i-1.5mm yobubanzi obuyi-4mm ubuncinane) malunga nobuso be-Ethernet (jonga umfanekiso ongezantsi).
Umzobo 10. Umzekelo wemingxuma kwindawo ebiyelweyo yangaphandle yokufudumeza ukuchithwa
REQ-MEC-0050: Umbala wamacandelo
Zonke iinxalenye zeplastiki kufuneka zibe mhlophe ngaphandle kwezinye iimfuno.
REQ-MEC-0060: Umbala wamaqhosha
Amaqhosha kufuneka abe bhlowu kunye nomthunzi ofanayo welogo ye-MLS.
Indlu kufuneka ihloniphe izicwangciso RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6
I-REQ-MEC-0080:isitofu ngundo kunye nezixhobo
I-EMS ivunyelwe ukulawula inkqubo epheleleyo yokutofa kweplastiki.
Isitofu seplastiki/amanqaku eziphumo kufuneka angabonakali kumphandle wemveliso.
9.2 Indibano yoomatshini
I-REQ-MEC-0090: Indibano yombhobho wokukhanya
Umbhobho wokukhanya kufuneka uhlanganiswe usebenzisa umthombo oshushu kwiindawo zokunyibilika.
Indawo ebiyelweyo yangaphandle kufuneka inyibilikiswe kwaye ibonakale ngaphakathi kwemingxunya yamanqaku okunyibilika.
Umzobo 11. Umbhobho wokukhanya kunye neendibano zamaqhosha ezinomthombo oshushu
REQ-MEC-0100: Amaqhosha endibano
Amaqhosha kufuneka adityaniswe kusetyenziswa umthombo oshushu kwiindawo zokunyibilika.
I-REQ-MEC-0110: Khupha kwindawo ebiyelweyo ephezulu
Izikrufu ezi-4 zisetyenziselwa ukulungisa ibhodi ye-AR9331 kwindawo ebiyelweyo ephezulu.Jonga i-RDOC-MEC-11.
Kusetyenziswe ireferensi ngaphakathi kwe-RDOC-MEC-10.
I-torque yokuqinisa kufuneka ibe phakathi kwe-3.0 kunye ne-3.8 kgf.cm.
REQ-MEC-0120: Izikrufu kwindibano esezantsi
Izikrufu ezi-4 zisetyenziselwa ukulungisa ibhodi ephambili kwi-enclosure ephantsi.Jonga i-RDOC-MEC-11.
Izikrufu ezifanayo zisetyenziselwa ukulungisa iindawo ezivaliweyo phakathi kwazo.
I-torque yokuqinisa kufuneka ibe phakathi kwe-5.0 kunye ne-6 kgf.cm.
I-REQ-MEC-0130: I-CT probe isidibanisi indlela nge-enclosure
Inxalenye yodonga lomkhombe wesiqhagamshelo se-CT probe kufuneka ilungiswe idityaniswe ngaphandle kokuculwa ukuze kuvumeleke ukunyameka okufanelekileyo kunye nokomelela okuhle ngokuchasene nokutsalwa kocingo okungafunwayo.
Umzobo 12. Iinxalenye zodonga lwe-CT probes
9.3 Isikrini sesilika sangaphandle
I-REQ-MEC-0140: Isikrini sesilika sangaphandle
Ezantsi kwesikrini sesilika kufuneka senziwe kwindawo ebiyelweyo ephezulu.
Umzobo we-13. Umzobo wangaphandle wesikrini sesilika kufuneka uhlonitshwe
I-REQ-MEC-0141: Umbala we-silkscreen
Umbala we-silkscreen kufuneka ube mnyama ngaphandle kwelogo ye-MLS ekufuneka ibhlowu (umbala ofanayo kunamaqhosha).
I-REQ-MEC-0150: Ubungakanani beleyibhile yekhowudi yenombolo yebha
- Ubungakanani beleyibhile: 50mm * 10mm
- Ubungakanani bombhalo: 2mm ubude
- Umlinganiselo wekhowudi yebha: 40mm * 5mm
Umfanekiso we-14. Umzekelo weleyibhile yekhowudi yebhakhowudi
REQ-MEC-0151: Uthotho inombolo yebha yekhowudi indawo ileyibhile
Jonga imfuneko yesikrini sesilika sangaphandle.
REQ-MEC-0152: Uthotho inombolo yebha yekhowudi umbala ileyibhile
Umbala wenombolo yesiriyali yebhakhowudi kufuneka ubemnyama.
I-REQ-MEC-0153: Uthotho lwezixhobo zeleyibhile yebhakhowudi yenombolo
Ileyibhile ye-serial number mayincanyathiselwe kwaye ulwazi mazinganyamalala ngokwe- RDOC-MEC-9.
I-REQ-MEC-0154: Ixabiso leleyibhile yenombolo yebhakhowudi yekhowudi
Inani le serial inombolo kufuneka linikwe yi-MLS mhlawumbi nge-odolo yokuvelisa (ifayile yokuzenzela) okanye ngesoftware ezinikeleyo.
Ngezantsi kwenkcazelo yophawu ngalunye lwenombolo yothotho:
Inkosi Unyaka ka-2019 =19 Inyanga = 12 kuDisemba Inombolo yesampulu yenyanga nganye yebhetshi Umenzi Reference
I-REQ-MEC-0160: Umlinganiselo weleyibhile yekhowudi yekhowudi yokuvula
Isazobe 15. Umzekelo weleyibhile yebhakhowudi yokuvula
I-REQ-MEC-0161: Indawo yeleyibhile yekhowudi yokuvula ikhowudi yebha
I-REQ-MEC-0162: Ikhowudi yokuvula ikhowudi yombala weleyibhile yebha
Umbala wekhowudi yebha yekhowudi yokuvula kufuneka ubemnyama.
I-REQ-MEC-0163: Izixhobo zeleyibhile yekhowudi yekhowudi yokuqalisa
Ileyibhile yekhowudi yokuvula mayincanyathiselwe kwaye ulwazi mazinganyamalala ngokwe RDOC-MEC-9.
I-REQ-MEC-0164: Ixabiso leleyibhile yenombolo yothotho lwebhakhowudi
Ixabiso lekhowudi yokuvula kufuneka linikwe yi-MLS mhlawumbi nge-odolo yokuvelisa (ifayile yokuzenzela) okanye ngesoftware ezinikeleyo.
I-REQ-MEC-0170: Umlinganiselo weleyibhile oyintloko
-Ubungakanani 48mm * 34mm
- Iisimboli kufuneka zitshintshwe kuyilo olusemthethweni.Ubuncinci ubukhulu: 3mm.Jonga i-RDOC-MEC-9.
- Ubungakanani bombhalo: ubuncinane yi-1.5
Umzobo 16. Umzekelo weleyibhile ephambili
I-REQ-MEC-0171: Indawo yeleyibhile ephambili
Ileyibhile eyintloko mayibekwe kwicala le-MG3 kwigumbi elinikezelweyo.
Ileyibhile kufuneka ibe ngaphezu kwendawo ebiyelweyo ephezulu nasezantsi ngendlela yokungavumelekanga ukuvuleka kwendawo ebiyelweyo ngaphandle kokususa ileyibhile.
I-REQ-MEC-0172: Umbala weleyibhile oyintloko
Umbala weleyibhile ongundoqo kufuneka ube mnyama.
I-REQ-MEC-0173: Izinto zeleyibhile eziphambili
Ileyibhile ephambili kufuneka incanyathiselwe kwaye ulwazi kufuneka lungapheli ngokwe RDOC-MEC-9, ngakumbi uphawu lokhuseleko, unikezelo lwamandla, igama leMylight-Systems kunye nesalathiso semveliso.
I-REQ-MEC-0174: Amaxabiso eeleyibhile eziphambili
Awona maxabiso aphambili eleyibhile kufuneka anikwe yi-MLS mhlawumbi ngomyalelo wokuvelisa (ifayile yokuzenzela) okanye ngesoftware ezinikeleyo.
Amaxabiso/umbhalo/ilogo/umbhalo kufuneka uhloniphe inani elikwi-REQ-MEC-0170.
I-REQ-MEC-0190: Uyilo lweprobe ye-CT
I-EMS ivumelekile ukuba izizenzele iintambo ze-CT probes, kubandakanywa intambo yowesifazane eqhotyoshelwe kwi-MG3, intambo yesilisa eqhotyoshelweyo.kwi-CT probe kunye nentambo yolwandiso.
Yonke imizobo kufuneka inikwe i-MLS
I-REQ-MEC-0191: Izinto eziphathekayo ze-CT probes parts kufuneka zithintele ilangatye(Uyilo lwe-EMS luceliwe)
Izinto ezisetyenziselwa iinxalenye zeplastiki kufuneka zibe nebakala V-2 okanye elingcono ngokungqinelana ne-CEI 60695-11-10.
I-REQ-MEC-0192: Izinto eziphathekayo ze-CT probes parts kufuneka zibe ne-cable isolationIzinto ze-CT probes kufuneka zibe ne-double 300V yodwa.
I-REQ-MEC-0193: I-CT probe female cable
Abafowunelwa ababhinqileyo kufuneka bahlukaniswe kwindawo efikelelekayo kunye ne-1.5mm ubuncinane (ubukhulu bobukhulu bomngxuma 2mm).
Umbala wentambo kufuneka ube mhlophe.
Intambo ithengiswa ukusuka kwelinye icala ukuya kwi-MG3 kwaye kwelinye icala kufuneka ibe nesinxibelelanisi esisifazana esitshixwayo nesicodikayo.
Intambo leyo mayibe nenxalenye ekrwada yokudlula eya kusetyenziselwa ukunqumla kwindawo ebiyelweyo yeplastiki ye-MG3.
Ubude bentambo kufuneka bube malunga ne-70mm kunye nekhonkco emva kwenxalenye yokudlula.
Isalathiso se-MLS sale nxalenye iya kuba yi-MLSH-MG3-22
Umfanekiso we-18. Umzekelo we-CT probe female cable
I-REQ-MEC-0194: Intambo ye-CT probe indoda
Intambo ithengiswa ukusuka kwelinye icala ukuya kwiprobe ye-CT kwaye kwelinye icala kufuneka ibe nesinxibelelanisi esiyindoda esitshixwayo kunye nekhowudi.
Ubude bentambo kufuneka bube malunga ne-600mm ngaphandle kwesihlanganisi.
Isalathiso se-MLS sale nxalenye iya kuba yi-MLSH-MG3-24
I-REQ-MEC-0195: Intambo yokwandisa i-CT probe
Ubude bentambo kufuneka bube malunga ne-3000mm ngaphandle kwezihlanganisi.
Isalathiso se-MLS sale nxalenye iya kuba yi-MLSH-MG3-19
I-REQ-MEC-0196: I-CT probe reference
Iimbekiselo ezininzi ze-CT probe zinokusetyenziswa kwixesha elizayo.
I-EMS ivunyelwe ukujongana nomenzi we-CT probe ukudibanisa i-CT probe kunye nekhebula.
Isalathiso soku-1 yiMLSH-MG3-15 ene:
- 100A/50mA CT probe SCT-13 evela kumvelisi we-YHDC
- intambo yeMLSH-MG3-24
Umzobo 20. CT probe 100A/50mA MLSH-MG3-15 umzekelo
Iimvavanyo zoMbane ezili-10
Amaxwebhu ovavanyo lombane
RDOC-TST-1. PRD-0001-MG3 inkqubo yebhentshi yovavanyo
RDOC-TST-2. Ifayile ye-BOM-0004-BOM yebhentshi yovavanyo yeMG3
RDOC-TST-3. I-PLD-0008-PLD ye-MG3 ibhentshi yovavanyo
RDOC-TST-4. Ifayile ye-SCH-0004-SCH yebhentshi yovavanyo yeMG3
10.1 uvavanyo lwe-PCBA
REQ-TST-0010: uvavanyo lwe-PCBA
I-100% yeebhodi ze-elektroniki kufuneka zivavanywe phambi kokudibanisa ngoomatshini
Ubuncinci bemisebenzi oza kuyivavanya yile:
- Ukunikezelwa kwamandla okukodwa kwibhodi ephambili phakathi kwe-N / L1 / L2 / L3, ibhodi enkulu
- 5V, XVA (10.8V ukuya 11.6V), 3.3V (3.25V ukuya 3.35V) kunye 3.3VISO DC ukuchaneka kombane, ibhodi main
- I-Relay ivuleke kakuhle xa kungekho mandla, ibhodi ephambili
- Ukwahlukaniswa kwi-RS485 phakathi kwe-GND kunye ne-A/B, ibhodi ye-AR9331
-I-120 ohm ukumelana phakathi kwe-A/B kwi-RS485 isidibanisi, ibhodi ye-AR9331
- VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V kunye 5V_RS485 DC ukuchaneka kwamandla ombane, AR9331 ibhodi
-VDD kunye ne-VDD2P0 DC ukuchaneka kombane, ibhodi ye-AR7420
Inkqubo yovavanyo eneenkcukacha ze-PCBA mayinikwe i-MLS.
REQ-TST-0011: uvavanyo lwe-PCBA
Umenzi unokuvelisa isixhobo sokwenza olu mvavanyo.
Inkcazo yesixhobo kufuneka inikwe i-MLS.
Umzobo wama-21. Umzekelo wesixhobo sovavanyo lwe-PCBA
10.2 Uvavanyo lweHipot
REQ-TST-0020: Uvavanyo lweHipot
I-100% yezixhobo kufuneka zivavanywe emva kokuhlanganiswa komatshini wokugqibela kuphela.
Ukuba imveliso idilizwe (yokusebenza kwakhona / ukulungiswa njengomzekelo) kufuneka iphinde ivavanye emva kokudibanisa kwakhona ngoomatshini.Ukwahlukaniswa kweVoltage ePhakamileyo yezo zombini izibuko ze-Ethernet kunye ne-RS485 (icala lokuqala) kufuneka zivavanywe ngonikezelo lwamandla (icala lesibini) kubo bonke abaqhubi.
Ke intambo enye iqhagamshelwe kwiingcingo ezili-19: izibuko ze-Ethernet kunye ne-RS485
Enye ikhebula ixhunyiwe kwii-4 iingcingo : Ukungathathi hlangothi kunye nezigaba ezi-3
I-EMS kufuneka yenze isixhobo sokuba zonke ii-conductor zisuswe kwicala ngalinye kwintambo enye ukuze zenze uvavanyo olunye kuphela.
Kufuneka kusetyenziswe amandla ombane e-DC 3100V.5s ubuninzi bokuseta i-voltage kwaye emva koko i-2s ubuncinci ukugcina i-voltage.
Akukho kuvuza kwangoku kuvunyelweyo.
Umzobo 22. Isixhobo sekhebula ukuze ube novavanyo olulula lweHipot
10.3 Uvavanyo lwe-Performance PLC
REQ-TST-0030: Uvavanyo lwe-Performance PLC
(Uyilo lwe-EMS luceliwe okanye lwenziwe nge-MLS)
I-100% yezixhobo kufuneka zivavanywe
Imveliso kufuneka ilawule ukunxibelelana nenye imveliso ye-CPL, njengeplagi ye-PL 7667 ETH, ngentambo ye-300m (inomoya).
Ireyithi yedatha elinganiswa ngescript "plcrate.bat" kufuneka ibe ngaphezu kwe-12mps, TX kunye ne-RX.
Ukuze ube nokumatanisa okulula nceda usebenzise iskripthi “set_eth.bat” esiseta i-MAC ku-“0013C1000000” kunye ne-NMK ku-“MyLight NMK”.
Zonke iimvavanyo kufuneka zithathe i-15 / 30s ubuninzi kubandakanywa ukuhlanganisa intambo yamandla.
10.4 Ukutshisa ngaphakathi
REQ-TST-0040: Burn-In imeko
Ukutshisa ngaphakathi kufuneka kwenziwe kwi-100% yeebhodi ze-elektroniki ezinemiqathango elandelayo:
- 230V amandla ombane
-Amazibuko e-Ethernet avaliwe
- Iimveliso ezininzi (ubuncinci ezili-10) ngexesha elinye, intambo yombane efanayo, kunye ne-PLC NMK efanayo
I-REQ-TST-0041: Ukuhlolwa kokutshisa
- Iyure nganye itshekhi ekhokelwayo iyadanyaza kwaye i-relay inokuvulwa / ingasebenzi
10.5 Uvavanyo lokugqibela lwendibano
REQ-TST-0050: Uvavanyo lwendibano yokugqibela
(Ubuncinci ibhentshi yovavanyo enye ibonelelwa yi-MLS)
I-100% yeemveliso kufuneka zivavanywe kwi-Final assembly test bench.
Ixesha lovavanyo kufuneka libe phakathi kwe-2.30min kunye ne-5min emva kokulungiswa, ukuzenzekelayo, amava omqhubi, umba ohlukeneyo onokuthi wenzeke (njengohlaziyo lwe-firmware, umba wonxibelelwano ngesixhobo okanye uzinzo lonikezelo lwamandla).
Injongo ephambili yebhentshi yovavanyo lokugqibela kukuvavanya:
- Ukutya umbane
-Jonga uguqulelo lwee-firmwares kwaye uzihlaziye xa kufuneka
-Jonga unxibelelwano lwe-PLC ngesihluzo
-Khangela amaqhosha: iiRelays, PLC, Factory reset
- Jonga iiledi
- Jonga unxibelelwano lweRS485
-Jonga unxibelelwano lwe-Ethernet
- Yenza imilinganiselo yokulinganisa amandla
- Bhala amanani olungelelwaniso ngaphakathi kwesixhobo (idilesi ye-MAC, inombolo yothotho)
- Qwalasela isixhobo ukulungiselela ukuhanjiswa
I-REQ-TST-0051: Incwadi yovavanyo lwendibano yokugqibela
Inkqubo yebhentshi yovavanyo RDOC-TST-1 kufuneka ifundwe kakuhle kwaye iqondwe phambi kokusetyenziswa ukuze kuqinisekiswe:
- Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo ibhentshi yovavanyo
- Ukusebenza kwebhentshi yovavanyo
REQ-TST-0052: Uvavanyo lwendibano yokugqibela
Ukusebenza kokugcinwa kwebhentshi yokuvavanya kufuneka kwenziwe ngokuhambelana ne-RDOC-TST-1.
REQ-TST-0053: Ileyibhile yovavanyo lwendibano yokugqibela
Isincamathelisi / ileyibhile kufuneka incamatheliswe kwimveliso njengoko kuchaziwe kwi-RDOC-TST-1.
Umzobo 23. Umzekelo weleyibhile yovavanyo lokugqibela
I-REQ-TST-0054: Uvavanyo lwendibano yokugqibela yaseKhaya Isiseko seDatha
Zonke iilogi ezigcinwe kwikhompyuter yendawo kufuneka zithunyelwe rhoqo kwiMylight Systems (ubuncinci ixesha elinye ngenyanga okanye ixesha elinye kwibhetshi nganye).
I-REQ-TST-0055: Uvavanyo lokugqibela lwendibano yovavanyo olukude
Ibhentshi yokuvavanya kufuneka iqhagamshelwe kwi-intanethi ukwenzela ukuba ikwazi ukuthumela iilogi kwisiseko sedatha ekude ngexesha langempela.Intsebenziswano epheleleyo ye-EMS ifunwa ukuvumela olu nxibelelwano ngaphakathi kwinethiwekhi yonxibelelwano lwangaphakathi.
REQ-TST-0056: Ukuveliswa kwakhona kwebhentshi yokuvavanya
I-MLS inokuthumela iibhentshi ezininzi zovavanyo kwi-MES ukuba ziyafuneka
I-EMS iphinde ivumeleke ukuba ivelise kwakhona ibhentshi yokuvavanya ngokwayo ngokwe RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 kunye ne-RDOC-TST-4.
Ukuba i-EMS ifuna ukwenza nayiphi na i-optimization kufuneka icele i-MLS isigunyaziso.
Iibhentshi zovavanyo eziveliswe kwakhona kufuneka ziqinisekiswe yi-MLS.
10.6 SOC AR9331 inkqubo
REQ-TST-0060: SOC AR9331 inkqubo
Imemori yesixhobo kufuneka idaneke phambi kokuba idityaniswe nomdwelisi wenkqubo jikelele ongabonelelwanga yi-MLS.
I-firmware eza kudanyaza kufuneka isoloko kwaye iqinisekiswe yi-MLS phambi kwebhetshi nganye.
Akukho buntu bubuzwa apha, ke zonke izixhobo zine-firmware efanayo apha.Ukwenza okuthandwa nguwe kuya kwenziwa kamva ngaphakathi kwebhentshi yovavanyo lokugqibela.
10.7 PLC chipset AR7420 inkqubo
REQ-TST-0070: PLC AR7420 inkqubo
Inkumbulo yesixhobo kufuneka idaneze phambi kokutshisa iimvavanyo ukuze i-chipset ye-PLC isebenze ngexesha lovavanyo.
I-chipset ye-PLC icwangciswe ngesoftware enikwe yi-MLS.Umsebenzi odanyazayo uthatha malunga ne-10s.Ke i-EMS inokuqwalasela ubuninzi be-30s kulo msebenzi uphela (amandla eCable + Ethernet cable + Flash + Susa intambo).
Akukho buntu bubuzwa apha, ke zonke izixhobo zine-firmware efanayo apha.Ukwenziwa komntu (idilesi ye-MAC kunye ne-DAK) iya kwenziwa kamva ngaphakathi kwebhentshi yokugqibela yokuvavanya.
Imemori ye-chipset ye-PLC inokukhanyisa phambi kokuhlanganisana (ukuzama).
Odm PCba IPcb Fabrication kunye neNdibano Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IPcb enamacala amabini IFlex PC IRigidFlex Pcb